भान्छामा सावधानी - टिप्स - प्रकाशितः कार्तिक २२, २०७४ - नारी
- ग्याँस चुलो बाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । ग्याँसको पाइप प्वाल परेको छ– छैन बेला–बेलामा चेक गर्नुपर्छ ।
- सिलिन्डर रित्तिएपछि सिलिन्डरलाई हल्लाएर वा घोप्टो पारेर प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
- ग्याँसको लेभल हेर्न तथा लिकेज भए–नभएको थाहा पाउन बजारमा उपलब्ध ग्याँस सेफ्टी डिभाइस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
- ग्याँस सिलिन्डरमा सकेसम्म नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिएको रेगुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- अहिले बजारमा उपलब्ध विभिन्न रेगुलेटरमध्ये अस्ट्रेलियन प्रविधिको ग्याँस सेफ्टी डिभाइसले ग्याँस ब्लक हुँदा, प्रेसरकुकर पड्किदा, पाइपमा प्वाल परेको अवस्थामा अटोमेटिक अफ भएर सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने दाबी गरिएको छ ।
ध्यान गर्दा हुने फाइदा पुस १९, २०७५
जाडोमा छालाको समस्या पुस १५, २०७५
जाडोमा छालाको सुरक्षाका लागि कस्ता प्रसाधन छान्ने  ? पुस ११, २०७५
मर्निङ वाक किन ? मंसिर १५, २०७५